Fomba fanamboarana plastika amin'ny ronono na Galalith - Ikkaro
firosoana >> Fanandramana trano >> Fomba fanamboarana plastika amin'ny ronono na Galalith
Ronono 1 kaopy
Vinaingitra 4 sotrokely
fandokoana sakafo (tsy voatery)
Izao dia tsy maintsy hafanaintsika ny ronono fa tsy avela hangotraka izany. Raha vao mafana dia arotsatsika ao anaty kaopy na lovia.
Izahay dia manampy ny vinaingitra ary manaitra mandritra ny 1 minitra.
Vita !! Arotsakay ao anaty colander ny ronono ary mitazona ny koba niforona izahay.
Ankehitriny dia mijanona fotsiny ny mamolavola azy na mametraka azy amin'ny lasitra ary avela mandritra ny roa andro mba hangatsiaka.
Saingy ny fanarahana azy dia tsy mahatratra vokatra tsara, farafaharatsiny tsy ireo antenaina hahazo firavaka ho an'i Coco Chanel.
Fitsapana voalohany manao Galalith
Notsapaiko ny fomba fahandro ny plastika Galalith na ronono ary somary nandiso fanantenana ny valiny.
Mazava fa amin'ny alàlan'ny famolavolana ny fizotrany sy ny fikapohana ny lakile, na ny hafetsena, dia afaka mahazo sombin-javatra mahaliana isika, saingy amin'izao fotoana izao dia mbola tsy toy izany.
Ny fomba fahandro dia efa naneho hevitra. Nanafana ny ronono aho ary alohan'ny nandrahoina dia napetrako tao anaty vera, nasiako fandokoana sakafo tamin'ny tranga sasany ary avy eo ny vinaingitra. Vorona misavoana eo no ho eo, mipetaka avy amin'ny paty izay casein.
Raha tsy maintsy mampiasa sivana ara-dalàna isika dia be dia be ny kesika mandany. Aleo mampiasa saringan'ny sinoa, iray amin'ireo lamba mitazona be dia be kokoa ary mamela antsika hamoaka tsara kokoa ny rano.
Ny fandokoana amin'ny fandokoana sakafo dia mety tsara. Mazava ho azy fa tsy ampy ny mamela azy ao anaty lasitra.
Ireo sombin-drakitra napetrantsika tsotra fotsiny tamin'ny plastika dia lasa mora volo. Toy ilay eo amin'ny sary.
Etsy ankilany, amin'ny sombin-javatra izay nametrahako tsindry sasany dia nihatsara kokoa ny valiny.
Ary indrindra ity sombin-javatra ity
Plastika henjana sy mazava no mijanona. Rehefa afaka herinandro dia mbola mivoaka ny "menaka" fa na dia manome fahatsapana fahalemena aza dia misy zavatra azo atao amin'ity toetra ity.
Ao amin'ny sombin-tsandriko dia mitoetra ny fofon'ny vinaingitra, mety noho ny fanararaotana, ny Galalith dia heverina ho tsy misy fofona
Ho an'ny fanandramana amin'ny ho avy
Hevitra hanatsarana ireto fitsapana manaraka ireto:
tsara kokoa ny manasaraka ny rano amin'ny kesika ary manery ny sombin-javatra.
Miezaha mampiasa ranom-boasarimakirana fa tsy vinaingitra araka ny resahina ato Azo ampianarina
mampiasa formaldehyde hamita ny ampahany ary jereo izay mitranga
Ny casein dia tsy mety levona anaty rano sy asidra, na dia mety hiteraka triatra aza ny fifandraisana amin'izy ireo na ny alkaly. Tsy misy fofona, tsy azo ovaina, tsy alergenika, antistatika ary tsy mora mirehitra (mandoro miadana sy mamirapiratra amin'ny rivotra izy, nefa may noho ny fanesorana ny loharanon'ny lelafo. May ny fofon'ny volo may).
Loharano sy loharano
Wikipedia Galalith anglisy
Vato Milk Jewlery
Ahoana ny fomba fananganana compost
Sokajy Fanandramana trano Ticket navigation
Fiaramanidina iraisana (urichic Delichon)
18 hevitra momba ny "Ahoana ny fomba fanaovana plastika amin'ny ronono na Galalith"
7 Novambra 2010 amin'ny 7:34 hariva
Tsy misy tsy mahomby, ankoatry ny vaky, dia lo. Toa tsy plastika tsara izany amiko, marina.
2 Janoary 2011 amin'ny 5:35 hariva
Salama tsara, te hilaza aminao aho fa nanao ny andrana fotsiny aho dia mbola tsy manana ny valiny, fa rehefa manana azy ireo aho dia hanoratra anao indray, amin'ity indray mitoraka ity dia milaza aminao fa miseho amin'ny boky maro amin'ny teny Anglisy ity andrana ity , amin'ny Espaniôla no nahitako ilay lahatsoratra izay eto ihany. Ao amin'ireo kinova hitako dia manafana ny ronono (tsy mangotraka) mihodinkodina izy ireo, misy ireo izay manisy vinaigitra tsikelikely ary ireo izay manamboatra azy, ny zava-misy dia "tapaka" ny ronono mamorona vongan-tany, ireto dia tsy maintsy arofanina, FA tsara kokoa ny mampiasa lamba na sivana hanalana ranon-javatra betsaka araka izay azo atao, manaova endrika miaraka amin'ny koba (casein) mijanona ao anaty sivana (tanana na bobongolo) ary avelao amin'ny toerana mafana , Misy ireo mametraka azy eo amin'ny radiator, tsy haiko raha hiasa @ _ @ Ho an'ny loko dia AOKAFANA hampiasa sulfate varahina, sodium hidroksida, sns (eto ny dokotera iray, saingy amin'ny teny Anglisy): http://facstaff.bloomu.edu/mpugh/Experiment%2011.pdf (mpandika teny google?) sy horonan-tsary izay mety manazava farafaharatsiny: http://www.metacafe.com/watch/310971/how_to_make_plastic_at_home_from_milk/ Manantena aho fa nanampy ahy, satria hitako fa be ny fisalasalana ary miala tsiny raha tsy toa izany. Fiarahabana feno fitiavana.
13 Janoary 2011 tamin'ny 3:02 maraina
Tena mahasosotra tokoa ny mahita ny sarin'ny lahatenin'i Galalith fa tsy mahazo ¬ ¬. Tsy nanam-paharetana aho namela ilay "plastika" napetraka nandritra ny tapa-bolana, navelako nandritra ny telo andro, ilaina ihany koa ny manazava fa ny bobongolo nataoko dia matevina (tokony ho 2cm) rehefa reraka aho dia namboariko amin'ny maripana ambany indrindra, fotoana fohy ary manelingelina ny fizotrany, toy ny hoe hafanana voajanahary na an'ny radiator izy, fa ny vokatr'izany dia ... cookie hafahafa, toy ny, miaraka amina vovon-drivotra anatiny, dia tsy toa plastika na aiza na aiza ary tena mahasosotra izany fa tsy hitako fa misy angona voarara tsara kokoa. Miala tsiny amin'ny fanampiana tsy misy ilana azy. fiarahabana
10 Febroary 2011 amin'ny 4:47 hariva
ahoana no fampiasana azy
16 Jona 2011 amin'ny 6:15 maraina
mora loatra…. Raha tsy tianao ho tapaka io dia mila milanja 20kg / cm2 ianao ary avelao ho maina raha mbola azo atao
14 septambra 2011 tamin'ny 2:07 maraina
Ry rahalahiko malala,
Azonao lazaina aminay ve Inona no ilaina manangana a orinasa kely karatra Galalith?
Fantatrao zavatra sasany momba azy?
26 Janoary 2012 tamin'ny 2:51 maraina
Karazan-dronono maromaro no nanaovako azy ary ny tena niasa mafy tamiko dia ny ronono soja ary mila miandry sasatra 2 andro ihany koa izy ireo
6 Novambra 2020 amin'ny 4:03 hariva
Tompokolahy: ny nataonao dia mitovy amin'ny fanaovana fromazy, satria ny casein no singa lehibe indrindra amin'ny fromazy miampy ny tavy voajanahary amin'ny ronono, ka azo ovaina io ary toa plastika. Miarahaba antsika rehetra.
Novambra 12, 2020 amin'ny 1:46 maraina
Izay ilay "CHEESE" vetaveta apetraka ambonin'ilay mofo ary asio tongolo matsiro.
1 Recipe tsikelikely
2 Fitsapana voalohany manao Galalith
3 Ho an'ny fanandramana amin'ny ho avy
4 Fananana casein
5 Loharano sy loharano